Disability Rights Ohio - Nala Soo Xiriir
Hay’adda Xuquuqda Naafada ee Ohio waxaa loogu talagalay sida ku cad sharciga federaalka inuu yahay nidaamka lagu ilaaliyo looguna doodo xuquuqda dadka naafada ah iyo sida uu qabo Barnaamijka Taageerada Macmiilka ee waafaqsan Sharciga Baxnaanada. Hadafka Hay’adda Xuquuqda Naafada ee Ohio waa inuu loo doodo xuquuqda aadanaha, madaniga, iyo xuquuqda sharciga dadka naafada ku nool Ohio.
MACLUUMAADKA XIRIIRKA IYO TILMAAMAHA
La xiriir Waaxda Adeegyada Naafada ee Ohio haddii aad u maleyso in xuquuqdaada sharciga ah lagu xad gudbay iyadoo ugu wacan tahay naafonimadaada, sida xagudub laguu geystay ama lagu dayacay, lagu qaysatay takoor, lagu diiday adeegyo ama aanad awood u lahayn inaad hesho adeegyada dadweynaha. Waxaa laga yaabaa inaan ku caawin karno.
Telefoonka: 614-466-7264 ama 1-800-282-9181 (Telefoon bilaash ah gudaha Ohio kaliya)
Foomka Qaadashada ee Onlaynka
Adeegyada turjubaanka waxaa heli kara dadka aan Ingiriiska ku hadlin.
Ka eeg qaybta Waraysiyada Warbaahinta xirmada saxaafadda iyo macluumaadka xiriirka.